Soo dejisan KOReader 2020.03.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: KOReader
KOReader – waa barnaamij loogu talagalay in lagu akhriyo buugaagta elektaroonigga ah loona arko dukumiintiyo qaabab kala duwan ah. Markii hore, softiweerka waxaa loo soo saaray Kindle, Kobo iyo PocketBook, laakiin markaa waxaa loo habeeyay aaladaha Android. KOReader wuxuu taageeraa EPUB, MOBI, DjVu, DOC, PDF, FB2, TXT, HTML, XPS, CBT, CBZ, RTF, ZIP iyo qaabab file kale. Softiweerku wuxuu la imaanayaa setalo badan oo lagu garto font, kala qeybsanaanta khadka, qaabka qoraalka, qoraalka ku duubaya, masaafada u jirta meelaha iyo cabbiraadaha kale baahiyaha shaqsi ee akhristaha. KOReader wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso qaamuusyo luqado kaladuwan si aad u hesho macnaha ereyga ama aad u muujiso erey aan la garaneyn oo aad macnaha ugu aragto Wikipedia. KOReader wuxuu awood kuu siinayaa inaad aragto waxa ku jira buugga, aad bogga aad rabto, ku dar buuggaag qoraal ah, raadinta ereyada qoraalka isla markaana si otomaatig ah ugu rog boggaga bogagga wakhtiga go’an. Codsigu wuxuu kuxiran karaa adeegaha ’Caliber’, wuxuu akhriyi karaa qoraalada ka soo baxa Wallabag, wuxuu laqeysiin karaa qoraalo lala yeesho Evernote oo uu la shaqeeyaa soo dejiyaha wararka.
Hawlaha ballaaran ee ballaaran
Adeegsiga qaamuusyada iyo Wikipedia si aad u raadiso ereyada
Kaalmaynta buuggyaraha OPDS ee caadiga ah
Is-dhexgalka Caliber iyo Evernote
Soo dejisan KOReader
Faallo ku saabsan KOReader
KOReader Xirfadaha la xiriira